Midoowga Afrika iyo Qaramadda Midoobay oo ka hadlay xaalada ka taagan xuduudaha Jabuuti iyo Eritarya. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Midoowga Afrika iyo Qaramadda Midoobay oo ka hadlay xaalada ka taagan xuduudaha...
Urur Goboleedka Midowga Afrika iyo Qaramadda Midoobay ayaa ka hadlay xaalada kusoo korortay xiisaddii dalalka Jabuuti iyo Eritarya, kaddib markii ay Ciidamada Eritarya qabsadeen dhulka la isku heysto ee xuduuda labada dal.
Gudoomiyaha Midowga Afrika Mousa Faki ayaa shaaciyey in uu ka welwelsanyahay xaalad cusub ee kusoo korortay xuduudaha labadda dal ee Jabuuti iyo Eritarya Sidoo kale Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramadda Midoobay ayaa soo cusboonasha khilaafka u dhaxeeyo Jabuuti iyo Eritarya ku sheegay in uu soo nooleeyey khilaafka u dhaxeeyo Wadamada Khaliijka.
Labada Dowlad ayaa waxaa horay ugu kala dhaxjiray ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socday dalka Qadar ayagoo isaga baxay halkaas kadib markii ay dowladda Eritarya Xiirka u jartay Dowladda Qadar halka ay Dowladda Jabuutina hoos u dhigtay xiriirkii Diblomaasi ee kala dhaxeeyey dowladda Qadar.
Qaraar kasoo baxay Qaramadda midoobay ayaa waxaa horay labadda dal loogu amray in ay ciidamadooda kala baxaan dhulka la isku heysto ayadoo geysan ciidamadda nabad ilaalinta ah ee ka socday dalka Qadar.
Previous articleRa’iisul Wasaare Kheyre”Haddii dalkeena uu xasilo Dadkeena waxa uu la tartami doonaa aduunyadda kale”
Next articleRa’iisul Wasaare Xasan Kheyre oo ku booqday Isbitaal Madiino dad qaba Dhaawacyo kala duwan.